Ururka Al-shabaab oo xiray xarumaha shirkadaha Nationlink, Telecom & Dahabshiil ee koonfurta Soomaaliya. – Radio Daljir
Marka, 02, October – Sida ay sheegayaan wararka uu Radio Daljir ka helayo koonfurta Soomaliya ururka Al-shabaab ayaa saaka albaabada u laabay xarumaha shirkadaha Nationlink iyo Telecom oo ka mid ah shirkadaha isgaarsiinta ee ka shaqeeya dalka Soomaaliya iyo shirkadda xawilaadda ee Dahabshiil.
Arrintaan ayaa timid ka dib markii uu ururka Al-shabaab u soo gudbiyey shirkadahaasi inay bixiyaan lacag Zako ah oo aan tiradeeda la cayimin, taas oo ay shirkaduhu ka cudurdaarteen sida ay sheegayaan warar madaxbanaan.
Mid ka mid mas?uuliyiinta shirkadahaasi oo diiday in magaciisa iyo shirkadiisaba la xigto ayaa u sheegay Radio Daljir in arrintaasi jirto uuna socdo wadahadal u dhexeeya labada dhinac oo dhacdadaasi la xiriira, mana uu bixin wax faahfaahin ah oo intaasi dheer.
Dhinaca isgaarsiinta waxaa shaqaynaya oo kaliya shirkadda Hormuud oo la sheegayo inay amarkaasi fulisay. Ma jiro wax war oo arrintaan la xiriira oo ka soo baxay ururka Al-shabaab.